बोनस सेयर राम्रो कि नगद लाभांश
बोनस सेयर वितरणपछि सेयरको भाउमा समायोजन हुने भएकाले बोनस सेयर पाउनुभन्दा पहिले सेयर बेच्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
कम्पनीहरूले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्दा कम्पनीको पुँजी बढ्छ । पुँजी बढेपछि कम्पनीहरूले पुँजी बढेको अनुपातमा नाफा पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बढेको अनुपातमा नाफा बढाउन सकेन भने कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा असर पर्छ र प्रतिसेयर आम्दानी घट्ने हुन्छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को लाभांशका रूपमा ८४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने आधिकारिक घोषणापछि एक जना मित्रले १२ सय रुपैयाँको हाराहारीमा प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सेयर किनेको थियो । बुकक्लोजका दिनसम्म आइपुग्दा सेयरको भाउ ९ सय ४० सम्म झ-यो भने बुकक्लोजपछि सेयरको मूल्य ५ सयको हाराहारीमा पुग्यो । बोनस सेयरले लगानीकर्ताहरूलाई के–कति लाभ भयो त ? बिगतमा बोनस सेयर दिने भएपछि सेयरको भाउ बढ्ने गथ्र्यो भने पछिल्लो समयमा घट्ने गरेको देखिन्छ ।
बोनस सेयर वितरणपछि सेयरको भाउमा समायोजन हुने भएकाले बोनस सेयर पाउनुभन्दा पहिले सेयर बेच्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यसो त प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को लाभांशका रूपमा ८४ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो, जब कि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी रु. १५.६३ मात्र थियो । रु. १५.६३ प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीले ८४ प्रतिशत बोनस सेयर दियो । त्यसो त अधिकांश सेयरधनी भने प्रतिसेयर आम्दानीको मतलब गर्दैनन्, बढी लाभांशको मात्र मतलब गर्छन् । त्यो पनि बोनस सेयरको महत्व दिने गरेको देखिन्छ । त्यसैले आम सेयरधनी नगद लाभांशभन्दा पनि बोनस सेयर दिए हन्ुछ भन्ने गर्छन् ।
कुनै पनि कम्पनीले समीक्षा अवधिको मुनाफाबाट बोनस सेयर वा नगद लाभांश दिने गर्छ । आमलगानीकर्ताको बोनस सेयरप्रति बढी आकर्षण रहे पनि बोनस सेयर वितरण गर्दा लगानीकर्ताहरूले बोनस सेयर पाएर बुकक्लोज भएपछि दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्य समायोजन गर्ने गरिन्छ । जति प्रतिशत बोनस सेयर पाएको थियो, त्यति नै प्रतिशतको सेयर मूल्य समायोजन भएपछि सेयर मूल्य घट्ने हुन्छ । यसमा सेयरधनीहरूले लेखाजोखा गरेको भने त्यति देखिँदैन । जति प्रतिशतले बोनस सेयर पाएको हुन्छ त्यति नै प्रतिशतले सेयरको मूल्य घटेपछि सेयरधनीका लागि त शून्य मात्र हुनेछ । बोनस सेयर भनेको हात्ती आयो हात्ती फुस्सा भनेजस्तो मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला ।
कतिपय लगानीकर्ताले भने बोनस सेयरभन्दा नगद लाभांश उपयुक्त भएको पनि बताउने गरेका छन् । बोनस सेयरले कम्पनीको पुँजी बढाउँछन् । पुँजी बढाउनुपर्ने भए मात्र बोनस सेयर वितरण गर्ने राम्रो हुने कतिपय विज्ञ र विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतमा पनि नेपाल राष्ट्र बैकैले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई पुँजी बढाउन निर्देशन दिएकाले सबैजसो कम्पनीले बोनस सेयर मात्र वितरण गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा पनि बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई पुँजी बढाउन निर्देशन दिएकाले पनि बिमा कम्पनीहरूले बोनस सेयर वितरण गरेको देखिन्छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो पुँजी बढाउनका लागि ८४ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यो बाध्यात्मक हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । बिमा समितिको निर्देशनअनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी १ अर्ब प-याउनुपर्नेछ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले मात्र ८४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको नभई सगरमाथा इन्स्योरेन्सले पनि दुई आर्थिक वर्षको लाभांशका रूपमा ८६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण पुँजी बढाउनका लागि वितरण गरेको थियो । तर पनि प्रतिसेयर आम्दानी १५.६३ रु. भएको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ८४ प्रतिशत बोनस सेयर दिँदा आगामी वर्ष कम्पनीले कति प्रतिशत लाभांश दिन्छ होला त भन्ने पनि सेयरधनीहरूको चासोको विषय भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा शतप्रतिशत बोनस सेयर दिएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा १७ प्रतिशत नगद लाभांश मात्र दिन सक्यो भने सबैजसो कम्पनीको स्थिति उस्तै–उस्तै देखियो ।
कम्पनीहरूले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्दा कम्पनीको पुँजी बढ्छ । पुँजी बढेपछि कम्पनीहरूले पुँजी बढेको अनुपातमा नाफा पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बढेको अनुपातमा नाफा बढाउन सकेन भने कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा असर पर्छ र प्रतिसेयर आम्दानी घट्ने हुन्छ । एकातिर प्रतिसेयर आम्दानी घट्छ भने अर्कातिर सेयरधनीहरूसँग सेयरको संख्या बढाउँछ । यसको असर सेयर बजारमा पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजारले गति लिन नसकेका कारण पनि बजारमा सेयरको संख्या बढी भएकाले हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । विगतमा पनि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिले गर्दा सेयर बजारमा सेयरको संख्या बढेकाले बिक्री चापका कारण सेयर बजार उकालो लाग्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा फेरि बिमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिले सेयर बजारमा असर पर्ने देखिन्छ । चर्चा गर्नुपर्ने विषय यो पनि हो ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को लाभांशका रूपमा ८४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो, तर बोनस सेयरमा लाग्ने लाभ कर सेयरधनी स्वयंले तिर्नुपर्छ । यसका लागि कम्पनीले अखबारमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो— बोनस सेयरमा लाग्ने लाभ करको रकम सिद्धार्थ बैंकको खाता नं. ००६१५००६८२१ मा जम्मा गरी त्यसको भौचर कम्पनीको प्रधान कार्यालय नारायणचौर, नक्सालमा बुझाउनु भनेर । अखबारमा प्रकाशित भएको यो सूचना सबै सेयरधनीले पढ्छन् भन्ने छैन अनि थाहा नपाउनहरूले के गर्ने ? यो सेयरधनीहरूलाई दुःख दिने नियत होइन र ? त्यसो त कतिपय सेयरधनीले प्रिमियर इन्स्योरेन्सको बोनस सेयरमा लाग्ने लाभकर सेयर धनी स्वयम्ले तिर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा नभएको पनि देखियो । सेयरधनीहरू काठमाडौंका मात्र हुँदैनन् ।
सेयरधनीहरू देश–विदेशमा छरिएर रहेका हुन्छन् । यसले समस्या पार्दैन र ? बोनस सेयरमा लाग्ने लाभ कर नबुझाएसम्म बोनस सेयर सेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा हुँदैन, हितग्राही खातामा जम्मा नभएसम्म सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न सकिँदैन, नगदमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । यसले सेयरधनीहरूलाई समस्यामा पार्ने त भए नि । के सेयरधनीहरूलाई दुःख दिने नियत मात्र हो सरोकारवालाहरूको ? कसैको भनाइमा नियामकीय निकाय बिमा समितिले नगद लाभांशको स्वीकृति नदिएको भन्ने पनि सुनियो ।
यसकारणले सेयरधनी स्वयम्ले तिर्नुपरेको भन्ने भनाइ पनि रहेको पाइयो । त्यसो हो भने नेको इन्स्योरेन्सले त बोनस सेयरका साथै बोनस सेयरमा लाग्ने लाभकरका लागि नगदलाभांश पनि दिने भएको छ नि । त्यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि बोनस सेयर र नगद लाभांश दिने भएको छ नि ! कसैले पाउने, कसैले नपाउने कस्तो नियम हो यो ? यसमा कसको बदमासी ? नियामक निकायको कि कम्पनीहरूको ? बोनस सेयर दिने सबैजसो अपवादबाहेकका कम्पनीहरूले बोनस सेयर दिँदा बोनस सेयरमा लाग्ने लाभकर नगद लाभांश कम्पनी आफैंले तिर्ने गरेका छन् ।